Exercise – Page7– Healthy Life Journal
အသက်ကြီးသူများ လဲမကျဘဲ ကြံ့ခိုင်စေမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
လရိပ်မေ နှစ်စဉ် အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ် လူသုံးဦးအနက် တစ်ဦးဟာ လဲကျနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ အသက်ကြီးလာချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက် မထိန်းနိုင်တာကြောင့် အိမ်မှာချော်လဲနိုင်တဲ့အန္တရာယ် ရှိတတ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ လဲကျတဲ့အန္တရာယ်လျော့နည်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်သင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစား သုံးမျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။...
အသက်ကြီးသူတို့အတွက် လွယ်ကူသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
ငွေကြယ်စင်ယံ အသက်ကြီးလာချိန်မှာ ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အိမ်မှာပဲ လွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်သန်စွမ်းခြင်း၊ ဟန်ချက်ညီမျှခြင်းနဲ့ ပျော့ပျောင်းသန်စွမ်းမှုတို့ကို ရရှိစေပါတယ်။ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း မတ်တပ်ရပ်ပြီး ပြေးတဲ့ပုံစံမျိုး ခြေထောက်ကို ကြွလိုက်၊ ပြန်ချလိုက် လုပ်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီး...
ခါးကြွက်သားတောင့်တင်းမှုပြေလျော့ပြီး ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ သက်သာစေမည့် နံရံကို ခြေဆန့်မှီခြင်းကျင့်စဉ်
ကိုထက် မူလအနေအထား-နံရံနားကပ်ပြီး ဖျာတစ်ချပ်ပေါ်မှာ လှဲနေပါ။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ • ကျောအောက်ပိုင်းအောက်မှာ စောင်ခေါက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဖက်ခေါင်းအုံးအသေးတစ်ခုကို ထားပါ။ • သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလှိမ့်ပြီး ခြေထောက်ကို နံရံနဲ့ ကပ်ရပ်ဆန့်တန်းလိုက်ပါ။ • ပုံမှာပြထားတဲ့ အနေအထားအတိုင်း ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအနေအထားအတိုင်း...
အိပ်ရာပေါ်မှာပင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် တင်ပါးဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း ၉ မျိုး
အိမ်မှာနေရတဲ့ ရက်တွေအတွင်း အိပ်လိုက်၊ စားလိုက်နဲ့ အချိန်မကုန်စေဘဲ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ အိပ်ရာပေါ်မှာပဲ အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် တင်ပါးဆွဲဆန့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း (၁) ခေါင်းအုံးပေါ် မှောက်ပြီး ဘယ်ခြေထောက်ကို ခေါက်ထားပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ...
ဗိုက်ခွဲပြီး ၆ လအကြာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ ရပါသလား . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လာဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ဗိုက်ခွဲပြီး ၆ လရှိပါပြီ။ လေ့ကျင့်ခန်းပြန်လုပ်လို့ ရပါပြီလား။ NN(FB) A. ဒါကတော့ ချုပ်ရိုးအနေအထားနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အနေအထားရယ်၊ အနာကျက်တဲ့ပုံစံပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ ဗိုက်ခွဲပြီး ၆...
အိုလံပစ်အားကစားဆီကရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေနဲ့ သားဥအိမ်ကင်ဆာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရှန်နွန်မီလာ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခုနှစ်ကြိမ်မြောက် အိုလံပစ်ဆုတံဆိပ်ရှင် ရှန်နွန်မီလာဟာ အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့ရတာတွေကနေ ရလာတဲ့ သင်ခန်းစာတွေဟာ သားဥအိမ်ကင်ဆာကုသမှုမှာ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကူညီပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ဆေးကုသမှုအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့အပိုင်းက အားကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။ ဆေးကုသမှုမှာ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အကောင်းမြင်စိတ်ဓာတ်တွေကို အားကစားကနေ...
ကိုထက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့က မစ္စတာဖန်ဟာ နှစ် ၅၀ နီးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် အခု အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ်မှာ ၃၀ အရွယ်လူငယ်လို နုပျိုသန်စွမ်းနေပါတယ်။ မစ္စတာဖန်းက အရပ် ၁ ဒသမ ၇၅ မီတာရှည် ပြီး...
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမေရိကန်နှလုံးကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့လေ့လာမှုအရ နှလုံးရောဂါဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ သေဆုံးမှုနှုန်း အများဆုံးအကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးသင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိပြီး နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ...